Nagu saabsan | Shandong Guanxian Huiquan Traffic Facilities Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2006, Shandong Guanxian Huiquan Traffic Facilities Co., Ltd. wuxuu ku yaal Guanxian New Century Industrial Zone, Gobolka Shandong. Shirkadda diiwaangashan ee 20 milyan oo CNY, waxay ku fadhidaa aag qiyaastii ah 43,290 mitir murabac ah. Waxaan nahay mid ka mid ah shirkadaha waawayn ee ku takhasusay wax soo saarka, iibinta qashinka kulul ee galvanized guardrail.
Shirkadda hadda waxay ku takhasustay dhismaha waddooyinka iyadoo xoogga la saarayo ilaalinta. Warshaddeena waxaa lagu qalabeeyaa laba xarig oo kulul iyo laba xariiq oo rinji buufis ah, taasoo noo ogolaaneysa inaan soo saarno 150,000 tan oo waardiye ah sanad walba .Huiquan ilaaliyaha iyo qalabka ka shaqeeya ayaa si adag u raacaya heerarka caalamiga iyo kuwa gudaha, sida Shiinaha, Mareykanka, Australia, Yurub iyo wixii la mid ah on. Shabakadeena iibka ballaadhan waxay ka kooban tahay in ka badan 40 dal oo ku yaal Aasiya, Yurub, Koonfurta Ameerika, Waqooyiga Ameerika, Afrika, Oceania. Dhanka kale, mugga dhoofinta ayaa kujira safka hore ee dalka. Marka waxaan nahay mid kamid ah kuwa ugu xirfada badan iyo kuwa ugu awooda badan soo saarayaasha ilaalada ilaalada.
Huiquan wuxuu diiradda saarayaa soo saarista ilaalin tayo sare leh, geeddi-soo-saar kasta oo wax soo saar ah waxaa lagu fuliyaa si waafaqsan ISO, CE. Waxaan kasbannay ISO, SGS, CE, BV iyo shahaadooyin kale. Shirkaddu waxay u taagan tahay inay ku guuleysato suuqa iyo macaamiisha wax soo saar tayo sare leh iyo adeeg daacad ah. In 2017, Huiquan waxaa loo qoondeeyey inuu yahay alaab-qeybiyaha mashruuca furitaanka mashruuca waddada weyn ee "Belt and Road".
Tas-hiilaadka gaadiidka Huiquan waxay diyaar u yihiin inay si daacadnimo leh ula shaqeeyaan macaamiisheenna si loo abuuro natiijooyin wanaagsan loona gaaro yoolalka guuleysiga.
Kooxda dhoofinta oo ay ku jiraan Horumarinta Macaamiisha, Iibka, Waaxda iibka kadib. Waxaan rajeyneynaa inaan kulashaqeeyo adeeggaaga.
Waxyaabaha ugu waaweyn: W Beam, U post with spacer, C post with spacer, H post with spacer iyo accessories (Bolts & Nuts, Reflector iwm.)
waxaan soo dhaweyneynaa booqashooyinka warshadeena ee aduunka oo idil si aad ugu fiicnaato aqoonsiga shirkadeena.